Chitatu, July 14, 2021 Chitatu, July 14, 2021 Douglas Karr
Zvakare zvakare, ndiri kushanda nebhizinesi riri kusiya agency uye ndichishanda neni kugadzirisa kwavo kuve YouTube ... uyezve, iyo agency yavaive vachishanda nayo ine muridzi weayo ese maakaunzi. Ndanga ndichigunun'una nemasangano anoita izvi kweanopfuura makore gumi ikozvino nekupa zano mabhizinesi kuti asamboite izvi. Kana bhizinesi harifanirwe kupihwa mukana wekupinda nepassword kugadzirisa chero account. Nzira dzakakodzera
Chipiri, July 6, 2021 Chipiri, July 6, 2021 Douglas Karr
Mwanakomana wangu aida bhizinesi kadhi kune wake DJ uye bhizimusi rekugadzira bhizinesi (ehe, ave kuda ave nePh.D yake muMath). Kuchengetedza nzvimbo pakuratidzira ake ese masocial chiteshi pane rake bhizinesi kadhi, isu taida kupa yakachena runyorwa tichishandisa zvidhori zvebasa rega. Panzvimbo pekutenga yega yega marogo kana kuunganidzwa kubva kune sitoko pikicha saiti, isu taishandisa Font Inotyisa. Font Awesome inokupa scalable vector mifananidzo inogona
Maitiro Ekunyora uye Kuedza Regex Mafirita eGoogle Analytics (Ine Mienzaniso)
Chishanu, February 26, 2021 Chishanu, February 26, 2021 Douglas Karr
Sezvo nezvakawanda zvezvinyorwa zvangu pano, ndinoita tsvagiridzo yemutengi uye ndobva ndanyora nezvazvo pano. Kutaura chokwadi, pane zvikonzero zvinoverengeka nei… chekutanga ndechekuti ndine ndangariro inotyisa uye ndinowanzo tsvagisa yangu yega webhusaiti neruzivo. Chechipiri kubatsira vamwe vanogona kunge vachitsvaga ruzivo. Chii chinonzi Chirevo Chenguva (Regex)? Regex inzira yekuvandudza yekutsvaga uye kuziva maitiro